ရန်ကုန်မှာ ကိုဗစ်ထက် ပိုဆိုးလာနိုင်တဲ့ တိတ်တဆိတ် ဇီဝိန်ခြွေသမား (ကျန်းမာရေးအတွက် အရမ်းအရေးကြီးပါတယ်) - Zet Star
တစ်ပြည်လုံး တစ်ကမ္ဘာလုံး စိုးရိမ်တကြီး အာရုံစူးစိုက်နေတဲ့ကိုဗစ်သည် ကာကွယ်ဆေး တွေ့လို့ WHO ခန့်မှန်းချက်အရဆိုလျှင် ၂နှစ်အတွင်း ကပ်ရောဂါပြီးသွားမယ်လို့ ပြောကြပါတယ်… ဒါပေမယ့်ရ န်ကုန်မြို့တွင် ဆောင်းရာသီနှင့် နွေဦးကာလတိုင်း ဖြစ်ပေါ်တက်သော အသက်အန္တရာယ် စိုးရိမ်အဆင့်ရောက်တက်သည့် လေထုညစ်ညမ်းမှုကြီးကိုရော ဘယ်တော့မှ ပြီးဆုံးမလဲ?
လွန်ခဲ့သော၂ရက်က ကျွန်မအင်းယာကန်နားမှာ ခါတိုင်းလို ပြေးပါတယ်… ကျွန်မသည် တစ်ပတ်မှာ ၂-၄ရက် ကို တစ်ခါပြေးရင် ၅-၁၀ ကီလိုမီတာ အမြဲတိုင်းပြေးဖြစ်ပါသည်။ သို့သော် နိုဝင်ဘာ ၁၈ ရက် နံနက် ၇:၃၀ မှာ ပြေးနေရင် ကျွန်မသည် အသက်ရှူရတာ ခါတိုင်းထက်ပိုပြီး ကျပ်လာပါတယ်… နှလုံးခုန်နှုန်းကလည်း ပျမ်းမျှအားထက် ပိုမြင့်တက်သွားပါတယ်။
အိမ်ပြန်ရောက်တော့ လည်ချောင်းနားလာပြီး glands တွေရောင်လာတဲ့အတွက် သံသယရှိလို့ AirVisual ဆိုတဲ့ app ကို AQI (အလေထုညစ်ညမ်းမှုအဆင့်) ကိုဖွေ့ကြည့်လိုက်သောအခါ 151 AQI (Unhealthy level)! အဲတော့မှ ကျွန်မသည် ပြေးနေစဉ် အဆိပ်အတောက်များစွာပါဝင်သည့် မီးခိုးများကိုရှူပြီး မိမိ၏အဆုတ်ကို ပြင်းထန်စွာ အလုပ်လုပ်စေလိုက် မိသည်ဟု သိလိုက်ရသည်။ ပြီတော့ကျွန်မသည် ဆေးလိပ်မသောက်တဲ့လူပါ သို့သော် ကျွန်မသည်ဆေးလိပ် ၃-၅ လိပ်နဲ့ ညီမျှသည့် ပမာဏကို အားကစားလုပ်နေသည့် တစ်နှာရီအတွင်း သန့်ရှင်းသည်ဟု ထင်သောလေမှ တဆင့်ရှူမီလိုက်ပြီးလား ဆိုပြီး တွေးဖြစ်လိုက်သည်။
အခုရက်ပိုင်း လေထုညစ်ညမ်းမှု သိသိသာသာ မြင့်တက်လာပါတယ်… နိုဝင်ဘာ၁၈,၁၉,၂၀ သုံးရက်ရှိပြီး air pollution level က မနက် (၅-၈ နာရီ) တိုင်း 150 AQI နဲ့အထက်ပါ…ထူးဆန်းတာက ကားတွေလမ်းပေါ်မှာ လုံးဝမရှိတဲ့အချိန်မှာ လေထုညစ်ညမ်းမှုက အရမ်းမြင့်နေတော့ ကျွန်မ အဖြေရှာရခက်တော့သည်။ ဒါနဲ့ပဲ မနက်နိုးလာတိုင်း ပြတင်းပေါက်အပြင်သို့ ကြည့်ဖြစ်သော်အခါတိုင်း ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ အချို့နေရာမှာ မီးခိုးတထောင်းထောင်းထွက်နေသည်ကိုတွေ့ရသည်… စက်မှုဇုံလည်းမဟုတ်ပါ…မြို့လယ်ခေါင်က ထွက်ရှိနေတာကိုတွေ့ရတာပါ။
ကျွန်မ သတိရမိတာကအရင်နှစ်ကလည်း AirVisual app နဲ့ကြည့်တော့ ဆောင်းရာသီအစပိုင်းကနေ နွေဦးအထိ ဒီလိုပဲ လေထုညစ်ညမ်းမှု မြင့်တက်မှု(130-200 AQI) ရှိခဲ့သည်…မိုးရာသီရောက်တော့ လေထုညစ်ညမ်းမှုပြန်လျှော့ (20-70 AQI) သွားသည်။ နောက်ထပ် သတိရမိတာက ဆောင်းဦးဆိုရင် အမှိုက်မီးရှို့ မီးစာလုံကြတဲ့ ဓလေ့…
ကျွန်မ မနေ့ကပဲ စိတ်ကူးယဉ်ဖြစ်တယ် အမှိုက်မီးရှို့မှုများကို အရေးယူနိုင်သည့် ဥပဒေကို စည်ပင်သာယာကိုအကြံပြုမယ်ပေါ့… သို့သော် အမှိုက်မီးရှို့မှုများကို အရေးယူနိုင်သည့် ဉပဒေရှိပြီးသားဆိုတာကို ဒီနေ့ post တစ်ခုကနေဖတ် ဖြစ်လိုက်သည်… အဲ post ကပြောတာက “အမှိုက်မီးရှို့မှုများကို အရေးယူနိုင်သည့် ဉပဒေရှိသော်လည်း ရပ်ကွက်တိုင်းတွင် လူ သန်းပေါင်းများစွာမှ စွဲစွဲမြဲမြဲ ဆောင်ရွက်နေသည့် ကိစ္စဖြစ်သည်က တစ်ကြောင်း၊ အမှိုက်မီးရှို့လျှင် လေထုညစ်ညမ်းစေသည်ကို သိရှိနားလည်မှုမရှိကြခြင်း…”။
အကျဉ်းချုပ်ပြောရရင် အမှိုက်မီးရှို့တဲ့ မီးခိုးများကနေ အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ၊ အဆုတ်၊ နာတာရှည်ရောဂါ နှင့် ကင်ဆာ ဖြစ်စေသော်အဆိပ်အတောက် (carcinogen) များစွာပါဝင်ပါသည်။
သစ်ရွက်သစ်ခြောက်များဆိုတာ သဘာဝအတိုင်း ဆွေးမြေ့ပျက်စီးနိုင်သည့်အရာ (biodegradable) ဖြစ်ပြီ ဓာတ်မြေသြဇာ နဲ့ မြေဆွေး (soil compost) အနေနဲ့ပြန်သုံးလို့ရတဲ့ အတွက်မီးရှို့စရာမလိုပါဘူး။ တစ်ခြားအမှိုက်များ အထူးသဖြင့်လပ်စတစ်ဆိုတာက မီးရှို့ရမယ့်အရာမဟုတ်ပါ…စည်ပင်သာယာ နဲ့ recycle companies တွေကနေ တာဝန်ယူပြီ ထိန်းသိမ်းလုပ်ဆောင်နေပါတယ်။
အခုကာလသည် ပိုပြီအရေးကြီးသော ကိုဗစ်ရောဂါကိုကာကွယ်ဖို့ ဦးစားပေးရမယ့် အချိန်ဆိုတာမုန်ပါတယ်…ဒါပေမယ့် ရေရှည်အတွက် ရန်ကုန်သူ ရန်ကုန်သားတွေ ကျန်းမာသော လူနေမှုစနစ်တစ်ခုကို ကိုဗစ်အလွန်မှာ ဆက်လက် နေထိုင်ရန် အလိုရှိသေးတယ်ဆိုရင်တော့ ရန်ကုန်​၏ အသက်အန္တရာယ်စိုးရိမ်အဆင့်ရောက်သည့်လေထုညစ်ညမ်းမှုအား လျှော့ချရန် အတူတူ ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
← မန္တလေးတိုင်း ရှမ်းတိုင်းရင်းသားဝန်ကြီး ကိုဗစ်ကူးစက်ခံရ (အစိုးရအဖွဲ့နဲ့ ထိစပ်မှုရှိခဲ့)
မော်လမြိုင်ဆေးရုံကြီးမှ စိတ်ဝေဒနာရှင် ကိုဗစ်လူနာ (၁) ဦး လွတ်ထွက်သွားသဖြင့် ပြန်လိုက်ခေါ်ခဲ့ရ →